DAAWO MUUQAALKA:- Dowladda oo soo bandhigtay muuqaalka qaraxii ka dhacay Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
DAAWO MUUQAALKA:- Dowladda oo soo bandhigtay muuqaalka qaraxii ka dhacay Muqdisho
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si kulul uga hadashay qaraxii xooganaa ee shalay ka dhacay goob maqaaxi ah oo ku taallo agagaarka dekadda magaalada Muqdisho, kaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Taliyaha ciidamada booliska Jeneraal C/xakiin Daahir Siciid (Saacid) oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qaraxaasi lala damacsanaa mid ka mid ah dugsiyada ka socdo imtixaanada mideysan oo ay qabaneeyso dowladda Soomaaliya.
Wuxuu taliyaha sheegay in qaraxaasi uljeedkiisu ahaa in lagu laayo dad shacab ah, isagoona dhinaca kale ka gaabsaday inuu carbaabo magaca goobta ee waxbarasho oo qaraxaasi lala damacsanaa.
Dhinaca kale, qaraxii shalay oo ahaa mid loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa wararka kale sheegaya inuu uljeedkiisu ahaa in lagu dilo ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ku sugnaa agagaarka maqaaxidda weerarka lagu qaaday.
Inta la xaqiijiyay qaraxii shalay ayaa waxaa ku dhimatay 6 qof oo ay ku jiraan hooyo iyo wiil ay dhashay, waxaana sidoo kale ku dhaawacantay tiro intaasi ka badan.
Ugu dambeyntii, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaaya qaabka uu u dhacay qaraxa iyo gaariga qaraxa fuliyay.